ပြည်နယ်အတွင်းရှိ PCB layout ကို၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကဘာတွေလဲ? - တရုတ် Fastpcba နည်းပညာ
ပြည်နယ်အတွင်းရှိ PCB layout ကို၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကဘာတွေလဲ?
PCB ဘုတ်အဖွဲ့ဝါယာကြိုး run မရနိုငျသောအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Pcb ဝါယာကြိုးလျှပ်စစ်သိထားနှင့်ဝါယာကြိုးစားပွဲနှင့်ဝါယာကြိုးပုံနှိပ်လိုအပ်သောဝါယာကြိုး width နဲ့အကွာ layout ကိုအပေါ်အခြေခံသည်, ဝါယာကြိုးယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာသင့်တယ်:
အသုံးပြုမှုအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်၏အဓိကအကြောင်းရင်းတွင် 1. သည်ဝါယာကြိုးနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခြင်း၏အမိန့်သောဝါယာကြိုးရိုးရှင်းသောနိုင်ပြီးဖြစ်ပါသည်, ပထမဦးဆုံးအလွှာ→ multilayer →တစ်ခုတည်းအလွှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Pcb ဘုတ်အဖွဲ့၏တူညီသောအလွှာအပေါ် signal ကိုတစ်ဦးချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ချောမွေ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲနှင့်အဖြစ်များတတ်သည်၏အချင်းဝက်လျှပ်စစ်လယ်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု, signal ကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်အပိုဆောင်း impedance ရှောင်ရှားရန်တစ်နည်းနည်း သာ. ကောင်း၏။
3. နှစ်ခုချိတ်ဆက်မှုကို pads အကြားဝါယာကြိုး layout ကိုတတ်နိုင်သမျှအတိုဖြစ်ပြီး, အထိခိုက်မခံအချက်ပြမှုများနှင့်အသေးစားအချက်ပြမှုများကိုပထမဦးဆုံးသွားပါ။ အသေးစားအချက်ပြမှုများ၏အနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လျှော့ချပေးပါတယ်။ မြေပြင်လိုင်းကိုဒိုင်းလွှားသည့် Analog စ circuit ကို၏ input ကိုလိုင်းဘေးတွင်ထားကြ၏ရပါမည်; တူညီသောအလွှာစပယ်ယာ၏အဆင်အပြင်အညီအမျှဖြန့်ဝေသင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ wire ပေါ်မှာအပြုအမူဧရိယာဘုတ်အဖွဲ့ warpage ကာကွယ်တားဆီးဖို့အတော်လေးမျှမျှတတဖြစ်သင့်တယ်။
တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ဖို့မသကဲ့သို့ 4. ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆားကစ်နဲ့ Analog ဆားကစ်ပုဝါယာကြိုးအတွင်းကွဲကွာရပါမည်။
အဆိုပါ Pcba ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တိုက်နယ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် pcb ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ internal ခုခံလျှော့ချရန် grounded နဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးချိတ်ဆက်ထားသည့်သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းတတ်နိုင်သမျှအတိုဖြစ်သင့်နှင့်တတ်နိုင်သမျှနီးစပ်ကြသောအခါ 5. ။
6. ဤကဲ့သို့သောမျိုးစုံ I / O လိုင်းများနှင့် differential ကိုချဲ့စက်များနှင့်မျှမျှတတချဲ့စက်များအဖြစ်မြန်နှုန်းမြင့်ဆားကစ်၏ I / O လိုင်းများ၏အလျား, တန်းတူဖြစ်သင့်သည်။ မလိုအပ်သောနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်အဆင့်ပြောင်းကုန်ပြီကိုရှောင်ကြဉ်ရန်။
7 multilayer ဘုတ်အဖွဲ့အသီးအသီးအလွှာပေါ်မှာခြေရာတွေဟာနားချင်းဆက်မှီလျှော့ချဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှ perpendicular ဖြစ်သင့်သည်။ အထက်နဲ့အောက်အလွှာ၏ alignment ကိုနှင့်မှန်သောချိန်ခွင်ကိုရှောင်ပါ။
8. pad ပါကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့ဧရိယာများ၏အပြုအမူဧရိယာနှင့်အတူချိတ်ဆက်သောအခါ, 0.5mm ထက်မနည်းတစ်အရှည်နှင့်အတူပါးလွှာသောဝါယာကြိုးနှင့်အတူကာကွယ်ပေးနိုင်ရပါမည်။ အဆိုပါပါးလွှာဝါယာကြိုးများ၏ width ကို 0.13mm ထက်လျော့နည်းမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
9. ပုံနှိပ် circuit board ရဲ့အစွန်းအနီးဆုံးဝါယာကြိုးပုံနှိပျ circuit board ရဲ့အစွန်းကနေ 5mm ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်သင့်သည်။ မလိုအပ်သည့်အခါအဆိုပါမြေပြင်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အစွန်းနီးစပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးလမ်းပြရထားလမ်းတစ်ဦးပုံနှိပ် circuit board ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ဝါယာကြိုးများနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အကြားအကွာအဝေးလမ်းညွှန်ရထားလမ်း၏အတိမ်အနက်ကိုထက်ကအနည်းဆုံး သာ. ကြီးဖြစ်ရပါမည်။
FASTPCBA နည်းပညာ Co. , Ltd မှတရုတ်, ရှန်ကျန်းထဲမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ် PCB ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ 14 နှစ်နှင့်အတူ FASPCBA သင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 35000 စတုရန်း meters.If အတူ HDI PCB တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထုတ်လုပ်သူသို့လှည့် PCB , ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်: pcba06@pcb-smt.net
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-27-2018